आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य वदली,अझै भारी वर्षाको सम्भावना छ ? – NawalpurTimes.com
आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य वदली,अझै भारी वर्षाको सम्भावना छ ?
प्रकाशित : २०७८ कार्तिक ४ गते ७:४३
आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज बिहानैदेखि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही वर्षा भइरहेको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका एकदुई स्थानमा वर्षा भइरहेको छ ।
आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य वदली रहने छ । प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशहरुका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलले जानकारी दिए ।
आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य वदली रहने छ । प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
भारी वर्षा र पहिरोको सम्भावना अब नरहेको मौसमविद् पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिन परेको निरन्तरको भारी वर्षा गराउने प्रणाली बााहिरिसकेकाले अब ठूलो वर्षा हुने छैन ।
“काठमाडौंमा आज बिहानबाट घाम लाग्न थालिसकेको छ । घाम पूर्णरुपमा नलागेर बदली भए पनि अब भारी वर्षा हुने छैन,” पौडेल भन्छन्, “यस अघिको प्रणालीको केही छुटपुट अंशका कारण बदली र वर्षा भए पनि त्यसले ठूलो वर्षा हुँदैन । छिटपुट वर्षा मात्रै गराउने छ ।”
हाल भारतको बिहारमा रहेका न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको सामान्य प्रभाव नेपालमा रहेको उनले बताए ।